ANDRIUS - တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် - လူတိုင်းအတွက် Diuretic ဂီတ
Andrius Diuretics ဆီးဂီတထုတ်လုပ်သူတစ်ဦး Florentine ဂီတပညာရှင်ဖြစ်ပါသည်, ၎င်း၏အသံသည် psychedelias အရောအနှောအပေါ်အခြေခံသည်, အီလက်ထရောနစ်ဂီတနှင့်သီချင်းဆိုအများစု gluten. အဆိုပါထုတ်ကုန်သီချင်းများရုပ်ရှင်တေးသံများနှင့်အစာခြေအခက်အခဲများဘို့ညွှန်ပြနေကြသည်.
Andrius ၏နောက်ဆုံးပေါ်ဆိုးသွမ်းသောအယ်လ်ဘမ်,7Diuretic psychedelic ရော့ခ်တေးသံများပြီးဆုံးခဲ့သည် 11 အိပ်မောကျသောညလ.
iTunes ကို & Apple ကဂီတ
WiMp / ဒီရေ
Pierluigi Norziglia ၏ကလောင်မှသည်
အင်ဒရူး Firenze, ကော်လံအသံအကျဉ်းချုပ်မှIve!
ဒေါင်းလုပ်ဂီတ ဒီ site ကနေ Diuretics ဆီး (ထုတ်ပြန်ခြင်းမပြုရသေးဂီတ!)
ငါ 10 အကောင်းဆုံးဟော့စ်ဘ်ဆာဗာများ
အရေအတွက်က Enter 418: မှန်ကန်သောအရေအတွက်အားရိုက်ထည့်ပေးပါ